Izincwadi ezihamba phambili ngeBuddhism | Izindaba Zokuhamba
Izincwadi ezinhle kakhulu zokuqonda ubuBuddha
UMonica sanchez | | Cultura
UbuBuddha, yize uthathwa njengenkolo, kimi bungaphezulu kohlelo lwefilosofi, indlela yokuphila. Kufundisa ukuthi ukholelwe kuwe, kukunikeze okhiye bokuphila impilo enokuthula nejabulisayo. Kulokhu okukhethekile ngizophakamisa uchungechunge lwe izincwadi eziphathelene nobuBuddha lapho uzokwazi khona ukuthi lo mqondo wefilosofi uqukethe ini nokuthi ungakusiza kanjani.
Yebo, Ngubani ongakaze azibuze ukuthi 'ngingubani?', 'Ngiyaphi?', 'Ngifunani lapha?' Yimibuzo, kahle, enonhlamvukazi, umuntu ngamunye azibuza yona ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi lapho esenkingeni ephelele yokuphila.
1 Izincwadi ezinhle kakhulu zobuBuddha
2 Imibuzo kaMilinda
3 Lokho uBuddha akufundisa
4 Inhliziyo yezimfundiso zikaBuddha
5 UBuddha, impilo yakhe nezimfundiso zakhe
7 Ukuhlakanipha Kwenhliziyo: Umhlahlandlela Wezimfundiso Zomhlaba Wonke zeBuddhist Psychology
Izincwadi ezinhle kakhulu zobuBuddha
Ezweni eliya ngokuya landa emadolobheni, kukangaki lapho uzizwe khona noma wacabanga ukuthi bekungathi siphambuka kude kakhulu nemvelo? Angikhulumi nje ngeqiniso lokuthi bayanda abantu asebevele behlala emadolobheni kunasemadolobheni, kodwa futhi lokho siphila impilo, ezikhathini eziningi, engasenzi sijabule.
Kusukela ebuntwaneni basitshela ukuthi kufanele sifunde ukuze sithole umsebenzi ozosinikeza ukuphepha futhi, uma sesikufezile, sizojabula. Kepha ... bangaki abantu obaziyo abajabule ngomsebenzi wabo? Bambalwa, akunjalo?
Abanye bazothi kunzima kakhulu ukushintsha impilo yakho, okuyiqiniso ezimeni eziningi. Yize kungeke kwenzeke. NgobuBuddha ufunda izinto eziningi, futhi enye yazo iwukuyeka ukukholelwa kulokho abanye abakutshele khona ngalokho okufanele ukwenze nokungakwenzi ngempilo yakho. Impilo yakho, mngani wami, ingeyakho, futhi nguwe kuphela okufanele uyithathele isinqumo. UBuddha wathi: ungashintsha impilo yakho, izinkolelo azidingekile.
Ngalesi sizathu nezinye, abantu abaningi bayakhulelwa futhi bahlele uhambo lwabo lokuya eMpumalanga Ekude njengolwazi lokuthwasa. Kukhona abanye abaya ngoba bamane banelukuluku lokwazi, kepha kubo bonke, lezi zincwadi zinconywa kakhulu:
Lo mbhalo, yize empeleni uvela ngekhulu lesi-XNUMX BC. C., ihlelwe ngumshicileli Incwadi Entsha ngezichasiselo ze ULucia Carro Marina. Ukufundwa kwayo kulula futhi kuyathokozisa njengoba yakhelwe ngokususelwa emibuzweni nasezimpendulo lapho izindaba ezinjena zikhulunywa khona njengokusinda komuntu ngemuva kokufa. Okumangazayo njengamanje uma sibheka ukuthi yabhalwa eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule.
Lokho uBuddha akufundisa
Kubhalwe ngu Walpola rahula futhi yahlelwa ngeSpanishi ngu I-Kier. Kungaba nencwadi enengqondo futhi ejulile, kepha ibalulekile ekuxhumaneni kokuqala nefilosofi yamaBuddha. Akukona okunye kokufundwa okulula ukuyiswa olwandle, kepha kuzosisiza ukuthi sizivulele umhlaba omusha othakazelisayo.
Inhliziyo yezimfundiso zikaBuddha
Incwadi ibhalwe ngumphathi weZen Thich Nhat Hanh, futhi yahlelwa ngu I-Oniro ngo-2005. Kungukubuyekezwa kwezici ezisemqoka zobuBuddha hhayi ukuthi zimbi njengaleyo eyedlule. Kumlobi, imfundiso yamaBuddha ifingqiwe emaQinisweni Amane Ayisisekelo: ukuhlupheka, imbangela yokuhlupheka, ukuqedwa kokuhlupheka kanye nendlela eholela ekuqothulweni kokuhlupheka.
UBuddha, impilo yakhe nezimfundiso zakhe
Kubhalwe isazi sefilosofi, imfihlakalo nomholi wezenkolo Osho, futhi yahlelwa ngu Ama-Gaia Editions. Ingenye yalezi zincwadi kungakuhle ukuthi ufunde kancane nsuku zonke, ngoba ungafunda okuthile kuwo wonke amakhasi alo. Kepha iyincwadi ehlukile, ngoba ayikutsheli ukuthi wenzeni, kepha ukuthi lezi "zifundo" kuzodingeka uzizwele wena ukuze uziqonde. Vele, ikunikeza izinkomba ezidingekayo zayo.
Ukuqonda ubuBuddha, wawungeke uphuthelwe yincwadi ngeSiddhartha, okuyigama eyayinalo ngaphambi kokubizwa ngokuthi uBuddha. Kunababhali abaningi abakhulume ngakho, kepha ngizotusa incwadi ka Hermann Hesse, ehlelwe ngumshicileli Usayizi we-Pocket. Emakhasini ayo, umbhali ulandisa ngempilo kaBuddha, ukuthi wabuthola nini futhi kanjani ubuhlungu, ukuguga, ukufa, nokuthi waziphatha kanjani ngemuva kwalokho, wanikela ngakho konke ukunethezeka ayenakho ukuze aqale ukuphila impilo ehluke ngokuphelele.
Ukuhlakanipha Kwenhliziyo: Umhlahlandlela Wezimfundiso Zomhlaba Wonke zeBuddhist Psychology
Le yincwadi ekhonjiswe ikakhulukazi kulabo abaqhuba noma abafuna ukuqala ukwenza ukuzindla, kanye nodokotela bezengqondo nabasebenza emkhakheni wezempilo yengqondo. Ibhalwe ngu UJack Kornfield futhi yahlelwa ngu IMashi Hare, umbhali usitshela uchungechunge lwama-akhawunti womkhuba wakhe we-psychotherapeutic, kanye nezithombe ezikhombisa ukusikisela nezindaba zothisha abangamaBuddha asebenze nabo.
Kunezincwadi eziningi ngobuBuddha, kepha ngalezi eziyisithupha, ngeke nje ukwazi ukuzicwilisa ohlelweni lwefilosofi oluthakazelisa kakhulu, kepha futhi, nakanjani, uzothola izimpendulo zemibuzo, noma okungenani, ngendlela kumele ilandele ukubathola.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Cultura » Izincwadi ezinhle kakhulu zokuqonda ubuBuddha
Thatha inja yakho uye nayo olwandle
Imikhosi eyi-10 eGalicia ngesikhathi sasehlobo okungafanele iphuthelwe (II)